Shabaab oo biyo dhaamin ka sameeyay Gobolka Mudug (Daawo Sawiro) – STAR FM SOMALIA
Ururka Al Shabaab ayaa waxa ay biyo dhaamin ka sameeyeen deegaano ka tirsan Gobolka Mudug, gaar ahaan Degmada Xarardheere iyo deegaano hoostagga.
Biyo dhaamintaan ayeey Shabaab ugu gurmadeen dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku sugan deegaanada Jowle iyo Dumaaye oo hoostagga Degmada Xarardheere ee Gobolka Mudug.
Gudoomiyaha Shabaab ee Gobolka Mudug Sheekh Abuu Cadnaan, ayaa sheegay ku dhawaad 30 tuulo oo ka tirsan Gobolka Mudug inay gaarsiiyeen biyo dhaaminta ay sameeyeen Shabaab.
Wuxuu sheegay inay sii wadi doonaan biyo dhaamintaan ay gaarsiinayaan shacabka ku nool Gobolka Mudug ee Abaarta ay saameysay, si bulshada ay u helaan gurmad wanaagsan.
Deeganada Gobolada dalka Somaliya, ayaa waxaa xilligaan ka taagan abaar saameysay dadka iyo duunyada, waxaana khatar ku jira nolosha dad badan oo Somaliyed, kuwaasi oo u baahan gar gaar deg deg ah in lala gaaro.
Al Shabaab Gobolada ay ka taliyaan ma tagi karaan Hay’addaha gar gaarka ee dalka ka howlgala, sidoo kalena ma tagi karto dowladda si gurmad loo gaarsiiyo dadka dhibaateysan, balse Shabaabka qudhooda ayaa isku dayaya inay gurmad gaarsiiyaan dadkaasi.
Maamulka Jubaland Ayaa Sheegay In ay Hool Gal Balaaran Oo Al-shabaab Ka Dhan ah ay Qaadi Doonaan